PetrPikora.com - Oke ugwu, Ugwu Jizera, Bohemian Paradise
Gaa masịrị ọdịnaya
Akwụkwọ na-aga n'ihu mgbe niile na foto nke mmepe nke Krkonoše, Jizera na Bohemian Paradise dịka oge si dị
Idenye aha na blọọgụ a
Ekekọrịta na email
Choo akwukwo a
Na-egosi izipu site na Mach, 2020
Gosi ha niile
Foto Valdstejn Castle
Wallenstein (Waldstein) bụ mbibi na mpaghara Semily nke dị nso na Turnov, na Pada Bohemian. Familylọ nke ndị nwenụ nke Wallenstein malitere na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke 13. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ochie kacha mma na mpaghara a. Ugbu a Wallenstein nwere obodo Turnov.
Ụlọ ahụ wuru otu n'ime alaka nke ezinụlọ Markvartic na 1260 ruo 1280. Ọ bụ eleghị anya si Jaroslav Hruštice ma ọ bụ nwa-ya Zdenek Wallenstein na ghọrọ ezinụlọ ha obi, dị ka nke ha na ụmụ ha na-eji predicate isi Wallenstein. A na-akpọ ha Wallenstein.
Jaroslav z Hruštice (Hruštice bụ ebe e wusiri ike dị nso na Turnov) nke mbụ jiri aha Jaroslav nke Lemberk n'ihi na ọ bụ onye òtù Lemberk, nwa nke atọ nke Havel nke Lemberk. Havel nke Lemberk si n'ezinụlọ Markvartic, bụ onye nwetara ókèala sara mbara na Northern Bohemia maka enyemaka nke Premyslids. Nne Jaroslav bụ Zdislava nke Lemberk, ememe na 1995.
Igwe mpempe akwụkwọ
Companylọ ọrụ igwe akwụkwọ EMBA spol. s ro, Paseky nad Jizerou (foto dị n’elu)
Akụ mmiri The eriri nkwusioru aga ka a longitudinal-adịghị agwụ agwụ waya, na nke e nwere dewatering nke pulp nke na emep uta eri na-edebe n'elu ihuenyo na mmiri aga n'ime sump. Ọzọkwa, mmiri si n'okpuru myọ aspirated agụụ igbe.
Pịa akụkụ The akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-scanned site sieve eji a chere na pịa akụkụ (multiple mpịakọta presses a n'usoro), nke mkpakọ ewepu ọzọ mmiri si akwụkwọ mpempe akwụkwọ.
Ngalaba akọrọ Ebe ọ bụ na ọ gaghịzi enwe ike wepu mmiri fọdụrụnụ na mpempe akwụkwọ, mpempe akwụkwọ ahụ ga-agbanye na friji kpo oku. Enwere ike idowe ihe mkpuchi (ikpochapu ma ọ bụ mkpuchi) n'etiti etiti akụkụ akọrọ. Enwere ike ịnwe calender na njedebe nke igwe mpempe akwụkwọ. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ pụrụ iche ebe a na-ete akwụkwọ. Nke a na-esote akara, nke a na-etinye mpempe akwụkwọ n'ime mpịakọta ma ọ bụ tebụl nke ebipụrụ mpempe akwụkwọ ahụ n'ọtụtụ.
Akpụnye ya n'ime mpempe akwụkwọ Ngwakọta nke cellulose…
COVID-19 (ọrịa coronavirus 2019) bụ ọrịa na-efe efe nke SARS-CoV-2 coronavirus ọhụrụ (nke a na-akpọbu 2019-nCoV), nke malitere ịgbasa na Disemba 2019 site na Wuhan obodo China. Thetù Ahụ Ike Worldwa kwupụtara ntụgharị COVID-19 na 11 nke February 2020. Ka ọ dị na 25 Machị 2020, enwere ikpe 614 136 kwenyesiri ike n'ụwa niile, nke ọnwụ 28 251 na 133 624 gbakere. COVID - 19 agbasalarị na mba 202 na ókèala. Na Machị 1, 2020, ikpe atọ mbụ nke COVID-16.00 na Czech Republic gbara ihe dịka elekere anọ nke mgbede CET. Ka ọnwa Machị 19, 29, puku mmadụ abụọ na narị abụọ, iri abụọ na abụọ (C2020ID) 2 ka ekwenyeala na Czech Republic. Ka ọ dị na Machị 669, ndị ọrịa 19 gbakere na Czech Republic, mmadụ iri na atọ nwụrụ na Czech Republic.
Inu ogwu na nnabata
COVID-19 bụ ọrịa na-efe efe nke ukwuu. Nje a nwere ike ibunye site n’otu onye rue onye ozo, gbasaa site na ntupo mgbe obula, ikuru, ma obu aru. Healthtù Ahụ Ike haswa mere atụmatụ na…
Enwere m ọrịa coronavirus ma ọ bụ enweghị m?
A haziri ajụjụ nyocha dị n'ịntanetị ọhụrụ a na-enyocha ihe enwere ike ibute ọrịa coronavirus Cov-19 iji belata onslaught nke ndị ọrụ ahụike. Companieslọ ọrụ Czech na teknụzụ mba ọzọ na imekọ ihe ọnụ na Ministry of Industry na Trade na eriri ekwentị pụrụ iche 1212 sonyere na mmepe ya.
Ekwuputara nke a na akwụkwọ akụkọ nke oflọ Ọrụ Na-ahụ Maka Tradelọ Ọrụ na Tradezụmaahịa na Onye na-ahụ maka mkpuchi ndụ mmadụ, otu n'ime ụlọ ọrụ dị n'azụ ule ahụ. Ajuju ajuju di na Intaneti koronavirustest.online.
Mgbaàmà ndị a na-ahụkarị bụ mgbaàmà iku ume, ahụ ọkụ, ụkwara, mkpụmkpụ ume na iku ume. N'ọnọdụ ndị ka njọ, ofufe ọrịa nwere ike ibute oyi baa, oke iku ume, oke akụrụ, ma ọ bụdị ọnwụ.
Saịtị a Ọ na - eji ozi sitere na isi mmalite dị na ntanetị n'efu, dị ka saịtị na netwọkụ mmekọrịta nke ụlọ ọrụ ahụike steeti, yana mgbasa ozi tụkwasịrị obi. Na mbụ emelitere nkeji iri ọ bụla, mana ugbu a kwa nkeji. Na mgbakwunye na…
Coronavirus HTML Template Free Download
Templatedị ndebiri HTML Coronavirus bụ ndebiri pụrụ iche maka iji oke ala eji eme ihe na-enye ohere ọ bụla ọ bụla iji ndị ọrụ novice mepụta weebụsaịtị mbụ pụrụ iche maka ịbugharị ngwa ngwa.
Egosiputa web peeji nke na ibe ndebiri zuru oke na ngwaọrụ niile, gụnyere desktọpụ, laptọọpụ, mbadamba, na ụdị smartphones niile. Ha nwere enyi na enyi zuru oke ịchọrọ ọrụ na ntinye ederede ga-enye gị ọkwá dị elu na nsonaazụ ọchụchọ.
Echiche mbụ n’ime imepụta ihe dị na mbụ bụ iji gosipụta otu, ịdị iche na ngwa ọ bụla na-amasị ndị ahịa. Otu ihe dị mkpa bụ etu nkọwapụta na echiche ndị ahịa si dị na mbido, yana ohere fọdụrụ iji chepụta ngwa mbụ ma ọ bụ imewe weebụsaịtị.
Ebumnuche m bụ imepụta ngwanrọ mbụ ka m wee ghara ime ihere maka ọrụ m n'ihu ndị ahịa nakwa na onye ahịa ekwesịghị itinyekwu ego na oge karịa ka ọ dị mkpa. Nke…
Prachovské skály bụ mpaghara okwute okwute, oghere nchekwa na akụkụ nke Bohemian Paradise echekwara Landscape, nke dị ihe dị ka kilomita ise ruo asaa n’ebe ọdịda anyanwụ nke Jičín n’agbata Prachov, Pařezská Lhota, Dolní Lochov na Blaty na Hradec Králové Mpaghara. Nkume oke ugwu ahụ malitere n'oge Mesozoic dị ka ihe na-enweghị ntụpọ nke Cretaceous. Mpaghara echedoro nọ na-elekọta AOPK ČR - ụlọ ọrụ mpaghara na Liberec.
Geomorphologically Prachovské nkume bụ akụkụ nke ndị nile Jičínská Upland, Upland podcelku Turnovská, district Vyskeřská Highlands na podokrsku Prachovská ugwu nta, nke dị iche iche geomorphological akụkụ.
Eleghị anya na njedebe nke narị afọ nke 13 Veliš Castle wuru n'otu n'ime ọnụ ọnụ ugwu dị n'akụkụ ala Veliš dị n'akụkụ. Mgbe afọ ole na ole gasịrị,…
Peeji nke katalọgụ
PetrPikora.com bụ katalọgụ weebụsaịtị na ntọala ihe ọmụma nwere nkwado ọgụgụ isi na ntụgharị gaa n'asụsụ 110.
Katalọgụ Internetntanetị bụ ndepụta nke njikọ nke weebụsaịtị na ntanetị nke emere n'usoro osisi subcategory. Ndị na-ede websaịtị bu nke kachasị ndị nwe ha, ma ndị editọ katata na-enyocha ma na-ebipụta atụmatụ ndị a, na-enye ohere maka njiri nke ọma nke njikọ nke otu katalọgụ nke otu, na enwere ike ịmata ngwa ngwa ezigbo ya.
Ndepụta data nwere ike inye nsonaazụ ọchụchọ dị mma n'ihi na ọ nwere ike ịdị nfe naanị na otu ndị eche echiche. Katalọgụ Internetntanetị abụghị ihe nchọta ntanetị nke ọrụ ya na-arụ ọrụ nke ukwuu; N’aka nke ọzọ, mmezi katalọgụ na-achọsi ike na akụrụngwa mmadụ.
Iji tinye saịtị gị na nchekwa data PetrPikora.com, biko jiri mpempe ịkpọtụrụ kpọtụrụ anyị.
Iji hụ na njiri na pr…
Sushi bụ olulu na dike na Osimiri Černá Desná. Ọ dabere na Labe River Board, ụlọ ọrụ nwe obodo, nke dabeere na Hradec Králové. Jablonec nad Nisou osisi na-arụ ọrụ mmiri.
Nzube nke mmiri na-arụ ọrụ bụ ìgwè mmiri iji hụ na collection of raw mmiri maka na mpaghara mmiri usoro ke nkezi ego 320 l / s, mitigation nke idei mmiri, ile mmadụ anya n'ihu nchedo ebe dina n'okpuru tank megide elu mmiri, huu na-adịgide adịgide mmapụta eruba n'ime osimiri eruba n'okpuru esite, ike iji na nzube azụ ugbo.
Mgbalị ndị mbụ iji wuo olulu mmiri dị na mmiri Јizera site na iju mmiri ahụ na 1897. Ihe owuwu mmiri nke Souš na Černá Desná dị kilomita 7,250 wuru n'etiti 1911 na 1915. Ọ bụ Prọfesọ mahadum ahụ bụ Ing. Otto Intute. Na Septemba 1916, ihe mgbochi mmiri kwụsịrị na Biolá Desná nke dị nso, ebe ebili mmiri mebiri ọtụtụ ihe ma gbuo mmadụ. Ọdachi a nwere mmetụta na inwekwu ọrụ na ọrụ nke Souš dam na…
Háje nad Jizerou, Loukov, Ugwu di elu site n’elu
The obodo Haje nad Jizerou emi odude ke Semily District na Liberec mpaghara, na n'etiti a njikọ n'etiti obodo Semily na Jilemnice, na bịara n'ikperé mmiri nke River Jizera (Grove na ekpe ụlọ akụ, ndị ọzọ so na nri).
Ndị bi na 690 bi ebe a. Na mbụ, na 1. 3. 2001, obodo e anọgide kọrọ 637 bi, 302 n'ime obodo nke Lower Sytová, 154 n'ime obodo ọdọ mmiri n'obodo Loukov 125 na 67 n'ime obodo Haje nad Jizerou. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ 188 dị n'ime obodo ahụ nwere ụlọ na-adịgide adịgide n'ụlọ ezumike 127.
Ebe mbụ e dere aha obodo a sitere na 1636.
N'oge gara aga, a na-akpọ obodo ahụ n'akụkụ ọzọ nke Ọdọ Mmiri ahụ.
Kemgbe 1960 obodo nta ahụ nwere akụkụ ndị a:
Obodo ahụ dị n'okporo ụzọ NNNUMX n'etiti Semily na Jilemnice. Na mgbakwunye na mpaghara mpaghara na Háje, ụfọdụ ụgbọ ala dị anya na-akwụsị.
Na mpụga obodo nta ahụ, na Horní Sytová, nke dịdebere obodo Dolní Sytová nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo Háje, enwere ọdụ ụgbọ okporo ígwè na mpaghara mpaghara Martinice na Ugwu Giant - Rokytnice nad Jizerou.
Ebe obu n’afo 1960 enwere akwukwo ebe ndi mmadu n’ulo…
Lookout ụlọ elu Černá hora (Panorama)
Ejirila kọlụm mbụ nke ụgbọ ala ochie site na 1928 dị ka ụlọ elu na-ele anya ebe ọ bụ na 1998. Ebe a na-elele na mbara igwe dị elu nke 21 m na-eguzo na elu 1 m dị elu nke oke osimiri na-enye echiche dịgasị iche ọ bụghị naanị nke odida obodo kamakwa akụkụ dị mkpa nke Ugwu Giant. Iji telison na-akwụghị ụgwọ.
Ebe nlere anya dị mita anọ n'okpuru nchikota ya na oge oyi ọ dị mfe ịrịgo na akpụkpọ ụkwụ ski.
Mgbe ihu igwe dị mma, ị nwere ike ịhụ ugwu Jeseníky, Ugwu Enugwu, Bohemian-Moravian Highlands, njiri mara nke Bohemian Paradise na Poland gbara agbata obi.
Thelọ nche a na-ele anya na Černá hora na-emeghe afọ niile.
Jinolice Ponds bụ usoro ọdọ mmiri atọ dị nso n'obodo Jinolice nke dị na Bohemian Paradise PLA, banyere 5 kilomita si Jicin. Usoro ahụ nwere ọdọ mmiri Oborský, Němeček na Vražda, nke mmiri iyi na-enweghị aha na-eme ka Javornice bụrụ onye ụkọ.
Usoro a dị na ndagwurugwu dị mkpa n'etiti Javornická na-ekpo ọkụ nke dị n'ebe ugwu na ugwu Prachov nke dị na ndịda (Prachovské skály na eriri njikọ nke ugwu Přivýšina - Brada). Osimiri bụ otu n'ime ebe a na-achọkarị na Bohemian Paradise. Abụọ n’ime ọdọ mmiri ndị ahụ bụ ogige ntụrụndụ, enwere ogige ọha, ogige, ogige ụlọ. Railgbọ okporo ígwè kacha nso dị na Jinolice, site na ya na-eduga n'akụkụ ọdọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ na-aga Prachov, okporo ụzọ edo edo na-eduga na ọdọ mmiri na ụzọ obe Pod Privýšinou.
Oborský (mpaghara 11,4 ha) - nke kachasị nke usoro ahụ; ntụrụndụ (ala ájá, ala ahịhịa na ahịhịa ahịhịa, a na-eji mmiri igwu mmiri na egwuregwu mmiri); A na-echebe ahịhịa ndụ mmiri dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ ruo n'akụkụ ndịda ọdịda anyanwụ dị ka ihe ncheta sitere n'okike Oboroká luka. Němeček (mpaghara 5,2 ha) - ntụrụndụ; na-enye ịsa ahụ (ọkachasị…
Frizen Jizera na Jablonec nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou (Jablonetz an der Iser na German) dị na mpaghara Semily na mpaghara Liberec. Ihe dị ka mmadụ 1 bi na ya. Ebe ọ bụ na Jablonec nad Nisou dị nso, n'okporo ụzọ ụkwụ dị ihe dị ka kilomita 600, a na-eji akara Czech Jablonec ma ọ bụ Jabloneček mgbe ụfọdụ. Aha obodo a bụ Jablonec nad Jizerou ejirila ya mee ihe kemgbe 21,9.
Na nkewa ihe nketa n’etiti ndị nwenụ nke Waldstein, Hynek nke Gylemnicze (Jilemnice ebe e wusiri ike) na Henyka nke Sstiepanicz (Štěpanice), na June 22, 1492, Hynek nke Waldtsstein na Gylemnicze nwetara, n’ime ihe ndị ọzọ, ihe onwunwe n’ime ọrụ ya. obodo Gablonecz na ụlọ ikpe nke ogwe osisi, ndị ọrụ ugbo, yana ụgwọ ọrụ na obodo tọgbọrọ n'efu nke Wogtiessycze (Vojtěšice).
Franz Joseph Ekpebiri m ịkwalite Jablonec ka ọ bụrụ otu na 14, 1896, nke ekwuputara na February 24, 1896, na ihe ùgwù, ọ bụghị site na June 7, 1896, kama site na July 7, 1896, nyere Jablonec uwe agha nke St. Procopius na mitra ya na ekwensu…
Netflix na YouTube ga-emebi ogo vidiyo
Mgbasa nke coronavirus n'ụwa nile emeela ka ọtụtụ ndị banye na iche ụlọ. Ọtụtụ mmadụ na-anọ n'ụlọ maka naanị ihe mgbochi, ha niile na-anwa ịbelata ogologo oge o kwere mee. Ikiri vidio bụ ihe omume a ma ama n'oge gara aga. Agbanyeghị, nke a na - ebufere ike nke netwọkụ ịntanetị. Netflix i YouTube nke a ga - ebelata ogo vidiyo dị n'ịntanetị.
YouTube gbasoro arịrịọ a. Nke a ga --belata mkpebi vidiyo ndabere na 30p gafee Europe maka ụbọchị 480. Agbanyeghị na ndị nnọchi anya Portal akwadobeghị nke a, ndị mmadụ ga-enwe ike ịgbanwere mkpebi dị elu n'onwe ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Agbanyeghị, mkpebi 4K dị elu agaghịzị adị.
Ugwu Horni Misecky Giant si n’elu
Horní Mísečky (German Ober Schüsselbauden) bụ obodo nta kachasị elu na ugwu Giant. Na usoro nchịkwa, ha na-adaba n'okpuru Vítkovice. E wuru ha na mkpọda nke Bear na ogo 1000. Ọ dị n'ebe ugwu Vítkovice na ọdịda anyanwụ nke Špindlerův Mlýn.
E wuru ụlọ ụlọ ugwu mbụ ebe a na 1642. Ná mmalite nke ndụ ya, ọkachasị ndị na-akpụ osisi na ndị na-egwu German biri ebe a. N'etiti narị afọ nke 20, a na-egwupụta mmanụ ebe a ma a ka nwere ihe fọdụrụ na mkpo. Ugbu a, ụlọ ndị dị na Horní Mísečky na-abụkarị maka ntụrụndụ.
Ejikọtara mmezi ahụ na Špindlerův Mlýn site na funvadi Medvědín. Na mbido Horni Misecky na-akwụsị ụzọ II / 286 site na Jilemnice. Ọzọkwa e mechie ụzọ NS Prameny Labe. E nwekwara ụzọ atọ na-agba ịnyịnya - K1A (site na Dolní Mísečky ruo Špindlerův Mlýn), K12 (site na Špindlerův Mlýn ruo Třídomí dị nso na Labská) na K13 (ka Vrbatova bouda). Ndị njem nleta nwere ike iru ebe ahụ…
EMBA bụ ụlọ ọrụ Czechoslovakia nke nwere ọdịnala dị ogologo na ụzọ dị mkpa maka ọha mmadụ na gburugburu ebe obibi. A na-emepụta ngwaahịa ya site na nhazi akwụkwọ ma na-emegharị ihe niile. Site na ngwaahịa EMBA, o na-enyekwa aka na nchebe na ichebe omenala na akụkọ ihe mere eme n'ọtụtụ mba. Dị ka onye ọrụ mpaghara mpaghara, ọ na-ahụ maka ịzụlite ọrụ njikwa na nchekwa ọnọdụ nke ndị ọrụ ya, tinyere ntinye aka inye aka na nkwụsi ike mmadụ na mpaghara ahụ dum.
Mmalite nke ụlọ ọrụ mbadamba ihe na Paseky nad Jizerou malitere na 1882, mgbe brothersmụnne Rössler hiwere ụlọ ọrụ maka mmepụta nke kaadiboodu na-acha ọcha na-acha akwụkwọ maka ngwaahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ iko na mpaghara Jablonec. A na-ahụ oge niile nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbasawanye nke mmemme na imepụta ihe.
Ihe dị ịrịba ama dị mkpa na akụkọ ihe mere eme nke kaadiboodu bụ nrụnye nke igwe bọọdụ akpaka na afọ 1970 na 1989, nke wetara…
Mkpọmkpọ ebe nke Trosky nnukwu ụlọ n’oge oyi
Mkpọmkpọ ebe nke obí eze rekeji dị n'elu ugwu nke otu aha (488 m), na obodo nta obodo Troskovice dị na Semily Liberec Region. Ọ dị na mpaghara Bohemian Paradise echekwara Landscape Mpaghara yana Bohemian Paradise Geopark, na 2015 bụ nke mbụ ụdị a sitere na Czech Republic ka agụnyere na netwọkụ geopark ụwa UNESCO. Thelọ a bụ nke steeti (nke National Heritage Institute na-elekọta) ma mepee ọha.
Nkpukpo nke oria odi nso Stachelberg
Kọlụm na-adọtaghị ụfụ na Redoubt nwere ebe nchekwa n'akụkụ Stachelberg ebe e wusiri ike. Ọ dị n'ebe ugwu nke obodo ahụ, ebe ụzọ toacléř gafere rute ugwu wee gafere ụzọ njem nlegharị anya, guzoro na mbido ogwe osisi Baroque edepụtara na 1670. Ọ bụ ndị nkịtị abụọ si Babí wuru, ndị ezinụlọ ha chebere ka ọrịa ha ghara ịrịa. Otu n'ime ụlọ kacha ochie nke ụdị ya na mpaghara kachasị obosara.
Igwe uhie nke Juda Cimrman
Uliri Igwe Uhie nke Jiriọ bụ ụlọ ọdụ ụgbọ elu kachasị elu nke dị n'ugwu Jizera. N'ụlọ ahụ dị n'okpuru ụlọ elu a na-ahụ anya bụ Ụlọ Ọrụ Jürde Cimrman, nke e meghere ọnụ ya na Ụlọ Elu; Enweta ụlọ elu ahụ site na ụlọ ngosi ihe nka. Ụlọ ahụ dị na obodo Příchovice nke dị na Příchovice dị nso Kořenov, obodo Kořenov, district nke Jablonec nad Nisou dị n'okpuru ala Příchovice.
E wuru ụlọ nche ahụ n'etiti 2011 na 2013 dịka atụmatụ nke Hutě architektury Martin Rajniš, bụ 23,7 m elu (ma ọ bụ 25,6 m elu). Ntọala 115 na-eduga n'ụlọ elu elekere. A na-eji osisi pine mee ihe dịka ihe owuwu ụlọ, ọdịdị mbụ ya bụ ụlọ mposi.
Thelọ nke ebe ngosi ihe mgbe ochie na ụlọ nche na-eche, ihe ruru nde anọ, bụ ndị ndị agbataobi Pensụl U čápa gbara agbata ego n'enwetaghị enyemaka ndị Europe. Na gburugburu ụlọ ahụ ka e wuru n’elu saịtị nke ebe ana - ekpofu ihe na agbapụ agbapụ na Na Sluneční Park, ndị na - ede iolọ Egwu Egwu ahụ / Enfant Terror, ihe ndị e ji osisi rụọ nke David Smrčka, Jaromír Bernart, Lenka Klodová na Adam Spolnik. Oru ngo a…
Obodo Sychrov dị n'obodo nke otu aha na Liberec Region, 16 km n'ebe ndịda Liberec na 6 km n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Turnov. Ọ bụ ụlọ nwe obodo na-emeghe ọha na eze ebe ọ bụ na 1950; ọ bụ Ụlọ Ọrụ Ihe Nketa nke National nyere ya nlekọta. Ebe obibi nkata bụ ihe atụ dị iche iche nke ebe obibi Neo-Gothic nke ọkara nke abụọ nke 19. narị afọ. Na mgbakwunye na ụlọ obibi ndị nwe ụlọ na arịa mbụ ya na ebe obibi nkịta, enwekwara nnukwu ogige chateau. Ụlọ nche ahụ abụwo ihe ncheta omenala mba kemgbe 1995.
Na mbido, Gothic wusiri ike dị na saịtị nke chateau taa, bibie n'oge Agha Afọ Iri Atọ. N'agbata 1690 na 1693, ndị nwe Sychrov Lamott nke Frintrop wuru Baroque chateau okpukpu abụọ na ya. N'afọ 1820, ezinụlọ ndị France bụ́ Rohan zụtara ebe a na-akpọ chateau na Sychrov, Sychrov ghọkwara otu n'ime ebe obibi ya. Agbanyeghị, dịka Baroque chateau ochie eruteghị ihe Rohans maka nnọchite anya na ibi ndụ dị mma, Prince Karel Alain Gabriel Rohan mere ka agbasawanye ya na ụdị…
Ulo nche Urororo dị na otu aha ya nwere mita 669 mita n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke obodo Roprachtice, n'aka ekpe nke okporo Nke 289 na uzo Semily - Vysoké nad Jizerou.
Onye wuru ụlọ ahụ, František Hubař nke Roprachtice bụ onye rụrụ nke a. A malitere oru a n’April 2008, nnukwu oghere ahụ mere na 17 Nọvemba 2009. Ntọala nkume nke 4,7 × 4,7 mita nwere ime ime ụlọ na elu nke mita 13. N'elu ya, a na-eji osisi osisi larch rụọ osisi, ọrụ nke ọkwa ọkwa obodo Václav Pacholík. Nrịgo iri asaa na-eduga na ụlọ ahụ a na-ahụ maka nchekwa n’elu ụlọ.
N'afọ 2010, ụlọ ọrụ nche na-arụ ụlọ na ebe ndị na-elekọta mmadụ. Ọ bụ ụlọ ndekọ osisi nwere atụmatụ ala nke ihe dịka 8 × 12 mita - ọ bụkwa ọrụ ọkwa ọkwa Pacholík. N’agbata afọ 2015 na 2016, akụkụ blọk gbakwunyere ụlọ a. N'oge ahụ, etinyere ụlọ ọrụ ọkụ fotovoltaic nke nwere ihe dị ka 6 kWp. Igwe ọkụ a na-arụ ọrụ na ọnọdụ agwaetiti ma na-enye naanị ụlọ elu a.
Microsoft Ọpụpụ Simulator Free Download?
Microsoft Flight Simulator bụ simulator ụgbọ elu nke Microsoft mepụtara. Emere ụdị nke mbụ na 1982. Enwere ike ibudata ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ọkachasị ụgbọ elu ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu. Microsoft Flight Simulator na-enye ihe osise pụrụ iche na eziokwu na ụgbọ elu ụwa 37 gụnyere na egwuregwu ahụ. Microsoft Flight Simulator na-eji data ụgbọ elu ụwa n'ezie na-ebufe ya na egwuregwu gị ozugbo. Nke a pụtara na mgbe ezigbo enyi gị ga-efe ezumike, ịnwere ike iso ya n'egwuregwu n'ụgbọ elu gị mebere!
Ọ bụrụ na failsntanetị adaa n'ụdị ụgbọ elu, ụgbọ elu niile ga - ejide ọgụgụ isi ruo mgbe ha nwere ike ịlaghachi mkpara ahụ na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ahụ n'ezie. N'otu aka ahụ, ị ​​ga-atụ anya ihu igwe kpọmkwem ka ọ dị ugbu a na mpaghara.
Microsoft Flight Simulator nwere otu ụwa kesara ndị egwuregwu niile na ọnụ ọgụgụ ha na narị puku narị ụgbọ elu. Ndị okike ọbụna nagidere lagoes wee rụpụta teknụzụ nke ha, maka…
Ihe omuma nke amamihe nke nzuzu: ihe omuma banyere data ebe ama
Ọ dịghị mfe idozi njem. Otu njem nwere ike ịgụnye ọtụtụ ụdị ụgbọ njem (ya bụ, Ọdụ ụgbọ okporo ígwè, Train to Stop to Stop), wee ga ije ma ọ bụ jiri Ọrụ nke Ekekọrịta site na nkwụsị a ruo ebe ikpeazụ, ịghara ịkọ maka atụmanya na atụghị anya ya; ọghọm; mmezi nke uzo ma obu uzo; na ọnọdụ ihu igwe nwere ike igbochi ịgbanye okporo ụzọ na-enweghị ịdọ aka ná ntị ọ bụla. Ọzọkwa, ọnọdụ ogologo oge nwere ike ọ gaghị adakọ na data akụkọ ihe mere eme dabere na ọnụọgụ mmadụ na mgbanwe nke igwe mmadụ, akụ na ụba obodo na atumatu atụmatụ gbasara ohere. Nke a bụ otu AI silarị enyere aka ịgwọ nsogbu nke okporo ụzọ.
AI nke Google kwadoro
N'iji data ebe amaghi ama site na ama, Google Maps (Maapụ) nwere ike nyochaa ọsọ ọsọ n'oge ọ bụla. Maapụ nwere ike ikele nnweta nke ngwa Waze Site na igwe mmadụ a ekenyela na 2013, ọ ka mfe ijikọ mkpesa okporo ụzọ dị ka owuwu na ihe ọghọm nke ndị ọrụ kwuru. Tonweta na…
Họrọ asụsụEnglisharabicBulgarianChinese (Simplified)Chinese (Omenala)CroatianCzechDanishDutchFinnishFrenchGermanGreekHindiItalianJapanKoreanNorwegianPolishPortugueseRomanianRussianspanishSwedishKatalanFilipinoHibruIndonesianLatvianLithuanianSerbianSlovakSlovenianUkraineVietnameseAlbanianEstonianGalicianHungarianMalteseThaiTurkishPersianAfrikaansMalaySwahiliIrishWelshBelarusianIcelandicMasedoniaYiddishArmenianAzerbaijaniBasqueGeorgianHaitian CreoleUrduBengaliBosniaCebuanoEsperantoGujaratiHausaHmongigboJavaneseKannadakhmerLaoLatịnMaoriMarathiMongolianNepaliPunjabiSomaliaTamilTeluguYorubaZuluMyanmar (Burmese)ChichewaKazakhMalagasyMalayalamSinhalaSesothoSudaneseTajikUzbekAmharicCorsicanHawaiianKurdish (Kurmanji)KyrgyzLuxembourgishPashtoSamoanScottish GaelicShonaSindhiFrisianXhosa
ebe a mara ụlọikwuu
nchekwa data saịtị
N’esogide @ ulo
Olileanya nke Haken
Hančův ihe ncheta
ụgbọ ala akụkọ ihe mere eme
eji ire ụtọ kaadiboodu
ike ike Rock
ahịrị ihe osise
otu esi eme mmemme
otu esi eme mkpuchi
otu esi eke
ahu mara nma
na -ewere pensụl
Elbe ala ahịhịa
ụgbọ ala USB
Ohia nke Alaeze
foto nke ikuku
efe n'elu na foto
ala ahịhịa juru
iko dị egwu
egwuregwu ịgba ọsọ
-eme ka ego
Enwere m ọrịa coronavirus
Igwe anụnụ anụnụ
N'elu Oké Nkume
n’elu Abụ Ọma
Enweghị m coronavirus
osisi linden echefu echefu
osisi na-echefu echefu
Pančavský nsụda mmiri
akwụkwọ na nkume igwe nri
foto na-akpụ akpụ
ọrịre nke kaadiboodu
ire ere akwụkwọ
ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ
na-ele anya towertěpánka
na-ele anya toweralý
felata ngwa ngwa
Snowin nwere anwụ
ụgbọ ala ochie
ndị na-agba snịịka
Narị afọ iri
ọnwa zuru ezu
-ele ihe anya
Udo diri udo
mmepụta nke kaadiboodu
Elu karịa Jizerou
ụlọ akwụkwọ elementrị
onye ọbụ abụ
Gosi ihe ndi ozo Gosi obere
,Chọ Mma, onyinye
Projectrụ ọrụ a na-amasị gị?
Nye aka na mmepe ọzọ, daalụ.
PetrPikora.com | Oke ike | Nlele anya | banyere EMBA.cz | Emba.cz | Archivbox.cz | Ngwa | Maapụ Google | Pọtụfoliyo
Kwadoro na teknụzụ Blogger